दशकपछि श्रीमतीलाई प्रेम पत्र | दर्पण दैनिक
प्रकाशित मिति: २०७७ जेष्ठ १९ गते ०७:४१
प्रिय जीवन साथी,
मैले तिमीलाई आज वैवाहिक जिवनको एक दशकपछि पहिलो पटक प्रेम पत्र लेख्ने दुस्प्रयास गरेकोछु । आशा छ, यो प्रेम पत्र तिमीले पुरै पढ्नेछ्यौं । हिमाल जस्ता सेतासेता कापीका पानाहरुमा कश्मीर रूपी काला अक्षरहरु सजाउदै, नागवेली वाक्यांसमा शब्दका पुष्पगुच्छा रुपि माला गाँस्ने प्रयासरत छु । मेरो जिवनका हरेक सपना, चाहाना, खुशी सबै– सबै तिमीलाई समर्पणगरी जिन्दगीको यात्रामा सहयात्रागरी आत्मीयता र सामिप्यता गाँस्दै गाँस्दै हाँसो आँसु उकाली ओराली जीवन संर्घषको उत्कर्षमा छु म, तिमी पनि छौं, वा हामी छौं । लामो स्वास फेर्न मन लाग्यो उफ ! अरु अरुले कुरागरेको मैले सुनेको थिए, अनि पढेको थिए, श्रीमान र श्रीमती एउटा सिक्काका दुईटा पाटा हुन अरे ! अनि एउटा रथका दुईटा पाङ्ग्रा पनि, मैले त्यो सधै महशुस गर्छु ।
जीवनको गाडी चल्न दुईओटै पाङ्ग्रासंगै चल्नुपर्छ । र त जिन्दगीको गन्तव्यमा पुगिन्छ । ति हाम्रा वाउबाजेले पुराना उखान टुक्का बनाउन कत्ति जानेका होलान आज लाग्छ ति सहि रहेछन । आज मैले के भनेर सम्वोधन गरु तिमीलाई रु अचेल चल्तीको भाषामा श्रीमानले श्रीमतीलाई कान्छु, म्याम, सानु, वेवी, आदि नाम पुकारेर बोल्ने प्रचलन छ । अनि श्रीमतीले श्रीमानको नाम पुकारेर बोल्ने हाम्रो सामाजिक मुल्य मान्यतामा छैन । महिलाले आफ्नो श्रीमानको नामवाट बोलाउनु हुदैन अरे अपमान हुन्छ, अशोभनीय हुन्छ, अमान्य हुन्छ भन्ने रुढिवादी परम्पराबाट हामी परिचालित छौ । यदाकदा सर, वा, फुच्चेको वावा तथा अचेल आधुनिक जमानाका युवतीहरुले श्रीमानको नाम पुकारेर पनि बोलाउनु सामान्य जस्तै भईसक्यो ।
तर, म हरपल बुझिरहेको हुन्छु मलाई अभाष भईरहेको हुन्छ कि तिम्रो सम्बोधनमा कति मिठास छ, कति आदर छ, कति त्याग छ, कति समर्पण छ शायद मैले शब्दमा व्याख्या नै गर्न सक्दिन । मैले तिमीलाई हिमालकी छोरी सूर्यको चमकजस्तै चम्कने सूर्यमुखी रानी, स्वर्गकी परी जस्ता रोमान्टिक उपनामले नबोलाए हुँला तर मनले भन्छ सधै यीनै नामको उपमा मा तिमिलाई सजाईराखु !
मैले यिनै आँखाले देखेको छु कि धेरै शब्बन्धहरुमा चिसावट आएको ! धेरै नमुना जोडिहरु टुटेका छन । दुई दिनको प्रेममा रमाएर पछिका ति पबित्र शब्बन्धमा एक अर्काले आरोप प्रत्यारोप गरि दुगन्धीत बनाएका ! हाम्रो सम्वन्ध आज सम्म एकनास सदाबहार चलेको छ । आजको दिन सम्म हाम्रो सम्बन्धमा उतार चढाव आएको न त मैले महशुस गरेको छु न त तिमीले नै । सधै भरि एक अर्का प्रतिको सम्मान, एक अर्का प्रतिको बिश्वास यसरी नै अटल रहोस । प्रिय जीवन साथी,
मलाई घरि घरि तिनै पुराना दिनका यादहरुले झस्क झस्काउछ । अनि म मनमनै हास्ने गर्छू थाहा छ तिमीलाइ मैले तिमीलाई पहिलो पटक देख्दाका केहि पलहरु छन सुन्छ्यौ ! हुन्छ म सुनाउछु । सुन्छ्यौ र सुनाउछु भन्दा फेरि धेरैले के ब्राहमणले पुराण, महाभारत वा रामायण नै पढेर सुनाए जस्तो के कुरा ग¥या होला भनेर तर्क गर्लान फेरि । शब्द तिनैलाई प्यारो लाग्छ जसले आफ्ना मन भित्रका खुलदुलिहरुलाई शब्द खेलाएरनै ब्यक्त गरेका हुन्छन । यहाँ तर्ककारहरुको जमात छ हाम्रो समाजमा । म रुनुको अर्थ आँसु झार्नु हो भनेर कहिले जिद्धि गर्न चाहान्न । अचेल सबै रुनेहरुले आँसु झर्दैनन र सबै आँसु झार्नेहरु रुदैनन पनि । तिमीले विचार गरेकी छौ कि छैनौं, धेरै खुशी हुदाँपनि आँखावाट आँसु झर्छन । कहिले झरेका आँसुलाई सोध्न मन लाग्छ । ए आँसु त किन झरिस आँसुले मलाई रुदै जवाफ पनि दिएको छ । जीवनका वृतान्त कति सुनाउ तिमीलाई । सायद तिमीलाई पनि यस्तै भयो होला । तिमी गगनबाट झरेका मोतिमा दानासंग तिमीले अन्तरवार्ता लियौ कि लिईनौ, त्यो तिम्रै मनले जानोस ।
म स्मरण गर्दै थिए, मैले तिमीलाई पहिलो पटक देख्दाका केहि पलहरु, केहि यादहरु, केहि रहरहरु, मनभित्रै गुम्सीएका काल्पनिक रहरहरु । २०६६ बैशाखको नव वर्षको पावन अवसरमा तिम्रै बावा आमाको घरमा शुभकामना दिन म आएको थिए । हुन त हाम्रो त्यो पहिलो सम्वाद वा भेट पनि थियो । बैशाखको महिना प्रचण्ड गर्मी, मध्यान्हको समय, छहारी विनाको उकालो बाटो म कसरी हिडे हुँला तिमीलाई पहिलो पल्ट भेट्न आउदा,
आजभोलि सम्झन्छु ति दिनहरु, मैले तिम्रैबारे सोच्दै सोच्दै उकालो काटको पल । बल्ल वल्ल त्यो माथि डाँडाँको पिपलको चौतारीमा पुगे । नर्कबाट सिधै स्वर्गमा पुगेको मलाई आभास भएको थियो । मलाई एक्कैछिन भए पनि थकाई मार्न मन लाग्यो । बस्न खोजे बैशाखको बाटोको धुलोले पिपलको बोटमुनि बस्ने ठाउँमा कस्तो धुलो नै धुलो रहेछ । मेरो मनले थकान र गर्मीले गर्दा एक सेकेण्ड पनि उभिन सक्ने अवस्था थिएन । त्यहि धुलो माथि बस्न मन लागेको थियो । तर तिमीसंगको पहिलो भेटमै धुलाम्य भएर कसरी जानु, निकै पर पुगर हरियो स्याउला टिप्न भ्याएछु । अनि त्यहि स्याउलामा बसे । त्यो दिन मलाई लुगाफोहोर हुने पीर थियो । मन भरि धेरै अनेकौ प्रश्नहरु आईरहेका थिए । ति उत्तरबिहिन प्रश्नहरु सँगै आफै सवाल जवाफ गरिहेको थिए । वाटोमा हिन्दा भुईको धुलोले असाध्यै मायाँगरेको जस्तो लाग्थ्यो । त्यो दिन मैले धुलोलाई भनेको थिए । ए धुलो त मलाई माया गर्न नआईजा मलाई मायाँ गर्ने कोहि अरुनै छ । जसरी प्रचण्ड गर्मीमा पिपलले मलाई शितलता दिएको थियो । त्यतिबेला नै परिकल्पना गरेको थिए तिमीले मेरो जीवनमा यसरीनै शितलता दिनेछौ भनेर । त्यतिबेला अहिले जस्तो सडक बनि सकेको पनि थिएन । दश मिनेट बस्छु सोचेर बसेको त आधा घण्टा सम्म के के सोचे सोचे ।
हुन त तिमीलाई मैले प्रत्यक्ष भेटेको पनि थिईन । आधी घण्टमा निदाउदै सपना देख्न थालेछु अनि निदरीमै भेटे, विवाह पनि भयो र सुहाग रातको परिकल्पना गर्न भ्याएछु । अनि एक्कासी झसंगभए निद्राबाट विउझे जस्तै भयो । मायाँ के हो, प्रेम के हो, सम्बन्ध के हा,े सबै सबै बुझ्ने मौका पाए । अनि पुनः उकालो लागे । हिड्दा बाटोभरि तिमीलाई नै सोचे । त्योभन्दा पहिले हाम्रो फोन पनि त्यति धेरै हुन्थेन । पहिलो पटक डेटिङ गएको अनुभव त छैन मसंग । तर पहिलो पहिलो मायाँ गर्दाको क्षण मुटुभरी संगालेको छु ।
हुन त म कुनै साहित्यकार पनि होईन, कलाकार पनि हाईन, मैले कुनै शब्दको वर्षात गरेर अवार्ड जित्नु पनि छैन । हाम्रो यथार्थ लाई बिर्सनपनि कहा सकिदो रहेछ । लकडाउनको फुर्सदिलो समयमा आफ्ना जिबनका केहि अबिष्मरणिय पलहरुलाई आज सम्झिएर लेखिरहेको छु । यदि आज लकडाउन हुन्थेन भने मेरो ब्यस्तताले मलाई कुदाई रहन्थ्यो । घरपरिवारलाई समय दिन मिल्थेन होला ।
अँ साच्चि सुनन मलाई तिम्रो काकाले चिन्नु हुँदोरहेछ । मैले त उहाँलाई कहिले देखेको पनि थिएन । एक्कासी उहाँसंग मेरो भेट भयो । उहाँले मलाई सिधै प्रश्न गर्नुभयो । तपाई विहे गर्ने होकि होईन, अपरिचित ब्यक्तिको प्रश्न एक्कासि तैपनि मलाई यति हिम्मत आयो कि मैले सहजै जवाफ दिएको थिए गर्ने हो । मलाई के थाहा तिमै्र काका हुन भनेर । पछि तिम्रो र मेरो सवै वृतान्त उहाँले मलाई सुनाउनु भयो । म पानी पानी भए आकासबाट खसे जस्तै भए । पछि आफुलाई आफैले सम्हाले । कस्तो गाह्रो लागेर आयो । मैले उँहासंग कस्तो वच्चा जस्तो ब्यवहार गरेछु । अनि एक्कासि धड्कन बढेर आयो । जेनतेन आफ्नो मनलाई सम्हाले ।
आज हामीले वैवाहिक जीवनको एक दशक पार गरेका छौं तर तिम्रो काका हाम्रोमाझ हुनुहुन्न । म उहाँको दिबङ्गत आत्माको चीर शान्तीको कामना गर्न चाहान्छु । सायद उहाँकै कारण हाम्रो आत्मीयता र सामीप्यता गाँसिएको हुनुपर्छ । मलाई सम्झना छ क्रिमकलरको सर्ट, कफी रंगको पाईन्ट, गर्मी छेक्ने रातो कलरको क्यापटोपी, सेतो मोजामा कालो पाटीसुज, पाटिसुज त्यो पनि भाउजुले धनगढीबाट मेरालागि ल्याई दिनुभएको उपहार थियो । त्यहि सुट बुटमा पहिलो पल्ट तिमीलाई हेर्न गए । रहरै रहरले तिम्रो घर पनि पुगे । साँझ परिसकेको थियो । दैलोअगाडी तिम्रो बहिनीलाई भेटे । एक्कै छिन त कतै तिमी नै हौ कि भनेर झस्किए । म तिम्रो घर पुगेको केहि समयमै तिमी पनि घाँसको भारी ल्याएर आयौं । मेरालागि त्यो शुभ साईत थियो । तिमीलाई देख्ने बितिकै मुटुले ढ्याङ्ग्रो ठोकी हाल्यो । तिमी पनि घाँसको भारी राखेर सिधै भित्र गयौं । मैले माने फोनमा बोल्नु र घर परिवारको अगाडी बोल्दा कत्ति गाह्रो हुन्छ । त्यति बेला मेरो मनले मलाई सम्झायो –तिमीले खोजेको मान्छे उनी नै हुन । त्यो साँझ राती १२ बजेसम्म मैले के के बोले बोले । तिम्रा बहिनीहरुले राती गफ गरेर सुत्नै दिएनन । तिमीले धेरैकुरा गरिनौ । टेलीफोनमै मलाई चिनिसकेकी थियौ । म धेरै कुरा तिमीसंगै गर्ने चाहान्थे । कवावमा हड्डी बनेर आए तिम्रा संगीनीहरु, बहिनीहरुकै प्रश्नको जवाफ दिन भ्याई नभ्याई थियो मलाई । राती पानी पनि कति पिए पिए । तिमीले भनेकि थियौ मलाई रुखमा चढेर घाँस काट्न आउदैन, धेरै काम गर्न जानेकी छैन । यति भन्दा मेरा आँखाहरु रसाईरहेका छन । भोलीपल्ट खेतमा गहँुकावालाहरु लहलह झुलिरहेका थिए, तिमी गहँु काट्न हिडेपछि म पनि खेतमै गए । खेतका कान्लाहरुमा ऐंसेलु पाकेर हेरि नसक्नु मेरो मनले मानेन ।
तिमीले टिपेर ल्याएको ऐंसेलुका थुप्पाहरुमा टुनामुना गरे जस्तो लाग्यो । अनि म झन जहाँ पनि तिमीलाईनै देख्न थाले । रुखमा, पातमा, ढुङगामा, पानीका फोकाहरुमा जहाँ पनि तिमीनै तिमी । अनि बहिनीले हामीलाई जिस्क्याउदै तिमीहरु श्रीमान श्रीमती भईसक्यौ जस्तै ब्यवहार गरेको सुन्दा तिमी लजाएको आज दश वर्ष भयो । तिम्रो पछ्यौरीमा टिपेका काफलका दाना खाएको आज एक दशक भयो । तिम्रा खेतका कान्लामा पाकेका एंसेलुका थुप्पा खाएको आज एक दशक भयो । समयको वेग कति रप्तारमा छ रु दिउसो आफ्नो घर फर्किए । बाटोमा ज्योतिषको घर । मेरो पालो मैले ज्योतिषलाई गएर सोधि हाले । उँहाले हामीलाई गणतन्त्र दिवसको पवित्र दिनमा बैवाहिक जीवनको शुभसाईत दिनुभएको थियो । देशभरी गणतन्त्र दिवसको उत्साह थियो । सरकारले सार्वजनिक विदा गरेको थियो । त्यो दिनको मलाई राम्रो संग स्मरण छ । गणतन्त्र दिवसको सुवर्ण अवसरमा जोडिएको हाम्रो दाम्पत्य जीवनको नाता आमुल परिवर्तानसंगै जोडिएको छ । तीन करोड नेपालीले राजतन्त्रको अन्त्यगरी ल्याएको गणतन्त्र देशमा कार्यान्वयनको क्रममा थियो । सौभाग्यले हाम्रो पनि सम्वन्ध स्थापित गरिएको थियो ।
भागेर जान तिमीले मानिनौ । मलाई पनि जन्म, विवाह र मृत्यु जीवनमा एक पटक मात्र हुन्छ भन्ने राम्रोसंग थाहा थियो । त्यसैले धुमधामसंग विहे गरियो । आखिर जसले जे भने पनि गाँउ भनेको गाँउ नै हुन्छ । त्यहाँ मर्यादा हुन्छ । अनुशासन हुन्छ । सहयोग हुन्छ । त्यहाँ दिदी वहिनीहरु ह्ुन्छन । खसीपाटी दिने पनि हुन्छन । आफन्त इष्टमित्र, जन्तीहरु खसी खाने पनि । बजारमा बस कार मोटरसाईकलहरु जान्छन । गाँउमा घोडाहरु निःशुल्क जान्छन ।
तिमी सेतो घोडामा म रातो घोडामा अनि जन्तीहरुको लस्कर तिमीले चढेको सेतो घोडा त हाम्रो नै हो । तिमीलाई बोकेर ल्यायो, त्यस्ले कुध्दा पनि नहल्लाउने कति राम्रो चालमा हिड्थ्यो । जन्ती लिन गएको दिन हाम्रो गुरुजी हाम्रो घोडामा जानुभयो । म मल्लो घरको धामीदाईको घोडामा चढेर गएको थियो । त्यो बज्या फटाहा घोडाले बाटोमा झण्डै मलाई लडाएको थियो । त्यसैले फर्केको दिन जन्तीले तिमीलाई हाम्रो सेतो घोडामा चढाएका हुन । हुन त अचेल पनि तिमीले हाम्रो घोडाको बारेमा कुरा गरिरहन्छ्यौ । अनि त्यो पल्लो दाईको घरको अर्का घोडामा बुवा चढ्नुभो ।
अनि विष्टजी बुवाको एकदम मिल्ने साथी, बाटोबाट आफ्नो घोडा फर्काएर लैजानु भयो । हाम्रो विवाहमा घोडा पनि कति हुन कति रु नेपालमा गणतन्त्रको परिवेश नयाँ नयाँ राज्यव्यवस्था आएको थियो । यसवर्ष गणतन्त्र दिवसमा केहि विशेष अनि धेरै आशा लाग्दो छैन । विश्व कोरोनाको त्रासमा छ । हामीले धेरै खुसी ब्यक्त गरिहाल्ने अवस्था छैन । देशमा आएको आमुल राजनितीक परिवर्तनले नागरिकलाई विकास र समृद्धिको आशा जागेको छ । तिमीलाई गणतन्त्रको पनि शुभकामना ।
आज वैवाहिक जीवनको एकदशकको बितेको अशवरमा मैले हाम्रा हरेक क्षणलाई सम्झिरहेको छु । म पनि गाँउमा पढेको त्यति धेरै कुरा गर्न पनि नजान्ने । त्यहि गाँउको झुपडी अनि नाङ्गो डाँडामा भएभरको मेहनत छ बुवाको, ओखर, कागती, सुन्तला, मौसमी, फलफुलहरु कति हो कति त्यहि खेती गर्ने मरो बावाको रहरै रहरमा जीवन ब्यतीत भईरहेको छ । हो त्यहि बगैचाको बिचमा रहेको मेरो बुवाको पबित्र मन्दिरमा तिमी र म एकदश पहिला निस्पट्ट रातको कालो घुम्टो ओढ्दै निसङ्कोच र निर्वाध रुपमा बैवाहीक जीवनमा गाँसिएका थियौं । आजभन्दा दश वर्ष पहिले मलाई हिजो जस्तै लाग्छ, तिमीलाई भित्र्याएको दिन । आज एक दशक २०७७ जेठ १५ गते पुराभएको छ । सोहि अवसरमा आज म फर्किएर हेर्दैछु, जीवनको गोरेटोलाई । एक दशकसम्म औधी खुसी दिन नसके पनि दुःख दिने प्रयास सायद आजका मितिसम्म गरेको छैन जस्तो मेरो एउटा मनले मलाई सधै भन्छ । आफ्ना कमि कमजोरी संसोधित गर्ने कति कोमल अनि दयालु हृदय छ तिम्रो रु मलाई अचम्म लाग्छ, मेरो अनुहार हेरेर कार्यक्षेत्रबाट घर पुग्दा म कस्तो अवस्थामा छु, तिमीले सहजै पत्ता लगाउन सक्ने दैवीय शक्ती जस्तो तिम्रो क्षमतालाई मेरो सलाम छ ।
मेरो जीवनका धेरै समस्या तनाव घरमा पुग्दा तिमीले तत्काल पत्ता लगाएर समाधान गरेकी छौं । मैले बोलेको प्रत्येक शब्दहरू नियालेर मेरो पीडा अनि दुःखेको घाउ तुरुन्त छाम्न सक्ने अद्भुत शक्ति छ तिमीमा । जीवन सङ्घर्षको क्रममा काँढेतार र क्याक्टसहरुले चिथोरेर रक्ताम्य भएको मेरो चह¥याएको घाउमा तिम्रा शितल वाणीहरुले तत्काल मल्हम लगाउन सक्ने, हैसियत छ तिमीसंग । रोईरहेको मेरो यो अतृप्त मनलाई विचारको माध्यमद्वारा तत्काल हँसाउन सक्ने, तिम्रो निस्वार्थ माया, मोहनी अथाह खुबी पाएको छु मैले तिमीमा । सुस्त सुस्त म तिम्रो मायाको छहारीमा ओत लागेको छु । एकदशकपछि नव दाम्पत्य जोडी जस्तो महशुस गरेको छु । मैले हाम्रो जीवनको यथार्थलाई आज लिपिबद्ध गर्ने प्रयास गरिरहेको छु । हरेक दिन आउने चौबीस घण्टाको समय तिमीलाई सम्झिरहन्छु । मलाई लाग्छ, विवाह पछिको प्रेम र प्रेमपछिको विवाहमा धेरै फरक हुँदोरहेछ । यी सपनाजस्ता दिन तिम्रै झझल्कोमा बित्दैबित्दै जान्छन । मेरो हृदयको दृष्टि जहाँसम्म पुग्छ, म तिमीलाई त्यहाँसम्म देख्छु । तिम्रो सम्झना र मायालुपनलाई बहन गर्न नसक्दा बहन्छन अश्रुबुँद अनि भिज्छ मन ।
जब म बसेर तिम्रो सामिप्यतामा नियाल्छु मन, तब तिम्रै सुकुमार मुहार मुस्कुराइ रहेको हुन्छ । विगत दश वर्षदेखि न त तिमीलाई धैरै खुशि देखेको छु न त दुःखीनै । मेरो जिन्दगीको सदावहार हौ तिमी । धेरै खुसि हुनेहरु धेरै दुःखी पनि हुन्छन अरे १ त्यो मैले भनेको होईन, हामी जस्तै हजारौं मायाँलु जोडीको वृतान्त हो यो । मैले सम्वन्ध विच्छेदका धेरै घटना सुनेको छु, पढेको छु, पिजँडा भित्रको पीडा कस्तो हुन्छ रु तिमीले कल्पना पनि गर्न सक्दिनौ । तिमीसँग बिताएको अमूल्य मिलनको कहानी मेरो हृदयको पानपाते पानामा स्मृतीको कलमले कहिल्यै नमेटिने गरि लेखेको छु । मेरो जिन्दगीको तिमी त्यो सुन्दरता हौ, जसलाई तस्वीरमा उतार्न सकिन्न ।
तिमी त्यो भाव हौ, जसलाई कवितामा लेख्न सकिन्न । तिमीलाई थाहा छ म दोहारी पनि गाँउछु । तिम्रो अनुपस्थितिमा मैले गीतका टुक्कामा कति दिन थरिथरीका शब्दमा दोहरी खेलेको छु । अस्ति महोत्सवमा राधिका हमाल, मञ्जु पौडेल र पुर्णकला विसी जस्ता चर्चित कलाकारहरुसंग दोहोरी खेल्दा तिम्रा दौतरीहरुले तिमीलाई जिस्काएछन । जीवन यस्तै हो, रमाउन जान्नुपर्छ । यो देशका हिजोका राजा रजौटाहरु, राणाहरु, पञ्चायती ब्यवस्थाका गाँउगाँउमा रहेका पञ्चहरु आफुलाई सर्बशक्तीशाली ठान्नेहरुले समेत सुखसयल गर्ने नसके होलान । राजनैतिक दलका नेता, मन्त्री, प्रधानमन्त्री उधोगपति पुँजीपति सबैलाई आ–आफ्नो खाले समस्या छ । हामीले आफुले आफुलाई सन्तुष्टी लिने हो । सम्पतिको पछाडी दौडनेहरुलाई सन्तुष्टी मिल्छ भन्ने होईन । गड्याङ गुडुङ आवाज निकाल्दा चिरिएर दुई फ्याक भएको आकाशको छातीबाट भएको मुसलधारे वर्षाबाट हाम्रा मुटुहरु लगलगाई रहेछन । यी कम्पित मुटुलाई ठेगान लगाउन मलाई तिम्रो अनि तिमीलाई मेरो मायाको न्यानो चाहिएको छ । ए प्यारी अबको एक दशक तिमी र म मिलेर भावनाको उर्बर खेती गर्ने किसान बनौं । सोच र चाहानाकी धनि छौ तिमी । धनि हुनका लागि धन हुनैपर्छ भन्ने पनि छैन । महान छौ तिमी त तिम्रो व्यवहारले अझ गाढा बनाउँछ हाम्रो अटुट सम्बन्धलाई । प्रेममा एक अर्काको अनुपस्थितिले यादलाई अझ प्रगाढ बनाउँछ र माया चरमोत्कर्षमा पुग्छ । विश्वभरिका राता गुलाफहरु जोडेर मैले तिमीलाई विराजमान गराउन सिंहासन तयार गरेको छु । फूलको राजा गुलाफ भएझैं म तिम्रो जिन्दगीको राजा हँु अनि तिमी रानी । राजाभन्ने शब्दमा पृथकता छ । राजा पनि एउटा मायालु शब्द हो । हिजोका वाईसे चौविसे बोटे राजा भनाउदाहरुलाई मात्रै राजा भनेर सम्वोधन गरिदैन ।
हुन त अंग्रेजहरुसंग लडेर विरताकासाथ राज्य एकिकरणको सहि अवतरण गर्ने राजाप्रति हाम्रो यो सफल जोडिको सलाम छ । उहाँले नेपालकालागि लड्नुभो र पो त आज हामी नेपाली बनेका छौ । म मा देश प्रेम पनि छ, यहाँ तिम्रो र मेरो प्रेमको कुरा मात्रै हुँदैन । जब देश रहन्छ, अनि हामी रहन्छौं । फेरि मलाई देशको बारेमा कुरा गर्ने मन लाग्छ । मैले नेपालका अधिकांस प्रधानमन्त्रीज्युसंग घण्टौ कुराकानी गरेको छु । मन्त्री ज्यू, राज्यमन्त्रीहरु मानननीयहरु, हजारौं नागरिकहरुको अनुभव र अनुभुति छ मसंग । दश वर्षमा पटक पटक नेपाल भारतको सिमामा पुगेको छु म । निःशुल्क देशको रक्षाका लागि खटिएका नागरीकसंग कुरा गरेको छु मैले । ती सिमाका जेष्ठ नागरिकका पीडा सुन्दा शरिर सिरिङ्ग भएर आउछ । उनले सुनाउछन, नेपाली भूमीको बारेमा तर दुर्भाग्य सिमाको बारेको कुरा सुन्दिने कोहि छैनन । अहिले देशलाई जिउँदो शहीद चाहिएकोछ । बीर गोर्खाली चाहिएको छ । सिमा सुरक्षाका लागि गौरव गर्न लायक नेपाली चाहिएको छ । कतिखेर लाग्छ, पाकिस्तानको जस्तो आत्मघाती वम लगेर सिमामा पट्काउनु पर्छ । कतिखेर लाग्छ सत्र हजार नेपालीहरुले नेपालको राजनैतिक परिवर्तनका लागि मात्र शहिद भएका होईनन । अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतप्य विस्तारवादको लागि शहीद बनेका हुन ।
शहीद बन्दैमा समस्या समाधान नहँुदो रहेछ । यसको उपाय फेरि कुटनैतिक सम्वादबाट निरुपण नै हो । वर्षौदेखि देशले एउटा हिरो खोजिरहेको छ । करिव ६० वर्षदेखि नेपालका ७० भन्दा बढी स्थानमा भारतले सिमा अतिक्रमण गरेको छ । दसगजा क्षेत्रमा भारतीय एसएसवीको ज्याजती नेपालीलाई सहि नसक्नु छ । वर्षौंदेखि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको चर्चामात्र हुन्छ । सिमामा हरेक वर्ष सारिन्छन जंगेपिलरहरु । टुलुटुलु हेर्छन सिमाका नेपालीहरु सरकारको ध्यान जाँदैन । कमाउने खेत भारतको भईसकेको छ । त्यक्तिकै कञ्चनपुरका गोविन्द गौतमले एसएसवीको गोली खाएका होईनन । नेपालमा मन्त्री बन्न भारतले समर्थन गर्नैपर्छ । भारतको रिमोटबाट चल्ने नेपाली राजनैतिक च्यानल भारतकै विरुद्धमा बोल्न सक्छ होला र रु यो हो आज नेपालको राजनैतिक अवस्था । सिक्कीम एउटा स्वतन्त्र देश थियो । जहाँ २१ जना संसदहरु थिए । जसमा २० जनाले सिक्कीमलाई भारतमा गाभ्ने निर्णय गरेपछि सिक्कीम देशनै भारतमा विलय भएको थियो । नेपालमा पनि यस्तो नहोला भन्न सकिन्न । आज संसदमा भएका गोप्यवार्ता छलफल जनतालाई थाहा हुदैन, भारतलाई थाहा हुन्छ । सरकारमा भारतका सिआईडीहरु छन ।
भारतका एउटा रिटायर सचिवले नेपालको प्रधानमन्त्रीनै परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा आजभन्दा दश वर्ष पहिले मलाई हिजो जस्तै लाग्छ, तिमीलाई भित्र्याएको दिन । आज एक दशक २०७७ जेठ १५ गते पुराभएको छ । सोहि अवसरमा आज म फर्किएर हेर्दैछु, जीवनको गोरेटोलाई राख्छन । अरुको संरक्षणमा आफ्नो घरमा झगडा गर्नु पछि पछुताउनु मात्र हुन्छ । नेताहरुलाई देश होईन, सरकार चाहिन्छ । मानिलिउ तिमी र मैले झगडा गरेर मैले अरुको घरमा हलिया बस्दा र तिमीले अरुको घरमा कमलहरी बस्दा कस्तो होला रु हो देशमा राष्ट्रियताको बारे भएको झगडाले यस्तै हुन सक्छ । हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनतास नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात गर्दै राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक– पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्दैस सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्यगर्दैस बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धनगर्दै सवर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा एक दशकपछि समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै, जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी संविधान जारी गरिएको छ । हुन त २०४७ सालको संविधान पनि विश्वको उत्कृष्ट मानिन्थ्यो तर २०५२ सालमा जनयुद्धको थालनी गरियो ।
देश बनाउने त तिमी र मैले हो । हामीजस्तै दाम्पत्य जोडीले हो । कोरोनाको कारण भारतबाट धेरै नेपाली स्वदेश फर्किएका छन । अब आर्थिक समृद्धीका लागि जुट्ने बेलाहो । उत्पादन गरौं, आत्मनिर्भर बनौ । अनि किन झुक्नुपर्छ भारतसंग रु एउटा सफल गृहणी सफल श्रीमान देख्छिन, त्यसो त एउटा सफल श्रीमानको पछाडी श्रीमतीको हात हुन्छ । तिमी विनाको सफलता मैले परिकल्पना पनि गरेको छैन । म बिर्सिन सक्दिन, तिम्रा ती स्वर्गको आभास दिलाउने अमूल्य विचार ती भव्यताले भरिपूर्ण झलकको सहारामा मैले स्वर्गको कल्पना गरें । मैले तिम्रो मायाँलाई दीलको बाकसमा लुकाए, चाबी वगलीमा राखेको छु ।
उही तिम्रो लोकेन्द्र ओझा, डडेल्धुरा
२०७७ असार २८ गते ०८:४९
बारा। जिल्लाको करैयामाई गाउँपालिकामा रहेका गाउँपालिका स्तरीय वडा नं.१ देखि ८ सम्मका धैरे जसो बाटोहरू मर्मत सम्भार गाउँपालिकाले गरेपनि अहिले काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् । गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा गाउँपालिका भरीका वडाहरूमा मर्मत सम्भार गरेपनि बिगतको दुई दिनको अनुगमनले गर्दा वडाहरूमा रिपोटिग गर्दा वडाहरुको कतिपय बाटो घाटोमा पानी जमी बिच बिचमा खाल्डो बनाई बाटोमा हिड्न र आवतजावतमा निकै समस्या भएको स्थानीय बासिन्दाहरूले गुनासो गरेका छन् ।